Akhriso Ama Daawo Taariikhda Qadiimiga Ah Ee Magaalo Xeebeedka Saylac | Berberatoday.com
Akhriso Ama Daawo Taariikhda Qadiimiga Ah Ee Magaalo Xeebeedka Saylac
Saylac(Berberatoday.com)-Saylac waa magaalo Qadiimiya oo ku taala Galbeedka Somaliland, waa caasimada gobolka Salel, magaalada Saylac waxaa ku taala Xeeb uu aad u weyn.
Sida taariikhda lagu sheego magaalada Saylac waxaa ay jirtay mudo ka badan afar iyo toban Qarni, waxaa ay taariikhyahanadu sheegaan inay tahay meeshii ugu horeysay ee Diinta Islaamku kasoo gasho dhulka soomaalida kadib markii carab ganacsato ahi ay keeneen diinta.
Saylac waxaa ku yaala masjid la yidhaahdo Qiblataynka waana masjid leh laba qiblo, waxaa la sheegaa in markii hore aa loo tukan jirin qiblada masaajidkan loogu tukan jiran dhinaca Masjidul aqsa balse markii dambe Masjidka Xaramka loo jeediyay.
Magaaladani waa magaalo qadiimiya waxaa lagu sheegaa inay wakhtiyada qaar ahayd Xudunta ganacsi ee Bariga Afrika.dhismayaashii hore ee magaaladani lahayd waxaa ka muuqda burbur xoog badan wallow ay jiraan dhismayaal cusub oo ay ka fuliso dawlada Somaliland.
Magaaladani Imika waxaa ay leedahay golle deegaan, Badhasaab, inkasta oo aanu dhamaan Haayada kala duwan ee dawladu gaadhin hadana waxaa jira xafiisyo uga furan wasaaradaha qaarkood.
Hadaba Wariye Nuux Kidiye oo ku sugan magaalada Boorama ayaa Safar ku tagay waxaanu ka diyaariyay Warbixinta Kooban ee Daawasho Wacan.